Chebe MacBook Pro ọhụrụ gị site na 2017 na aka nchekwa a | Esi m mac
Chebe 2017 MacBook Pro ọhụrụ gị na aka nchekwa a
Naanị otu izu gara aga anyị mụtara na Apple na-emelite usoro dum nke laptọọpụ dị na nso MacBook Pro, na-eme ka ha nwekwuo ike site na aka nke ndi ohuru ohuru. N'ihi nke a, anyị chere na site ugbu a gaa ahịa nke ụdị laptọọpụ a ga-etolite karịa na ya ndị ọrụ ga-achọ nhọrọ nchekwa dị ka onye nzuzu.
N'ihi nke a, anyị na-egosi gị ọzọ nhọrọ nchedo maka ụdị kọmputa a na ọnụahịa dị mma. Ọ bụ obere akpa nke ga-eme ekwe ka ị ibufe gị MacBook Pro n'enweghị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchekwa laptọọpụ ọhụrụ gị ka ọ ghara ikwe ma nwee mmetụ, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị lebara ohere ịzụrụ mkpuchi dị ka nke anyị na-eweta n’isiokwu a anya. Na ahịa enwere nhọrọ enweghi ngwụcha, mana na Soy de Mac Anyị na-achọ ndị kachasị mma na-echebara uru ego bara.
Dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo ndị anyị na-etinye n'isiokwu a, mkpuchi mkpuchi nke anyị na-atụ aro taa dị na agba anọ ma jiri ihe dị mma rụọ ya. Ya imewe bụ ugbu a na na okwu nke ya egosipụta ọtụtụ ihe anyị nwere ike ịgwa gị na Ọ nwere ọtụtụ mpụga akpa dị ka nke ọma dị ka a ukwuu padded imecha n'ime.
Emechiri ikpe ahụ na mkpọchi siri ike na nke zoro ezo nke na-eme ka mgbe ị mepere ma ọ bụ mechie ị gaghị enwe ike ịkọ ahụ Macbook ahụ. Ọnụ ya, maka 13-inch MacBook Pro Ọ bụ euro 18,10, ma ị nwere ike ịhọrọ diagonals ndị ọzọ na ọnụahịa ndị yiri ya. N'ezie, ọ bụ nhọrọ iji tụlee ma ọ bụrụ na i nweela laptọọpụ Apple ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ otu n'ime ya ọhụrụ MacBook Uru si 2017.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Chebe 2017 MacBook Pro ọhụrụ gị na aka nchekwa a
Video tụnyere nke ọhụrụ MacBook Pro 2017 na MacBook Pro 2016